အိုင်ဖုန်းအတွက်အကောင်းဆုံးသူလျှိုအသုံးချပရိုဂရမ် ၁၀ ခု (၂၀၂၀ နောက်ဆုံးသတင်း)
နေအိမ် Phone Spy iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးသူလျှို App ၁၀ ခု
အိုင်ဖုန်းတွေကိုသူလျှိုလုပ်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုလိုချင်လား။ iPhone ၏ပြောဆိုချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်။ 100% လုံခြုံသောစနစ်နှင့်လုံးဝမတူပါ။ ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ အိုင်ဖုန်းတွေကိုတောင်စောင့်ကြည့်နိုင်တယ်။
မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်လူတို့၏စစ်တမ်းများနှင့်စိစစ်အတည်ပြုမှုများစွာကိုပြုလုပ်ရန်သင်အားစတင်တောင်းဆိုသည့်နေရာတွင်သာအဆုံးသတ်ရန်တောင်းဆိုသောအချိန်ဖြုန်းတီးသောလိမ်လည်မှုများအကြောင်းပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒီနေ့သင်လုပ်မယ့်အရာမဟုတ်ဘူး။
ငါပြောနေတာပါ iPhone spy app ကိုအလုပ်လုပ်သည်တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ iPhone မှာအချက်အလက်တိုင်းကိုအဝေးကနေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးတယ်။ တကယ်တော့၊ ဒီနည်းလမ်းတချို့ကသင့်ကို iPhone ကိုမထိစရာမလိုဘဲစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ပေးလိမ့်မယ်။
ဒီနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုစီကိုငါစမ်းပြီးစမ်းပြီးပြီ။ တစ်ခုချင်းစီက verified iPhone spy app တစ်ခုပါ။ ဒါ့ကြောင့်ဒီလမ်းညွှန်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ဖတ်ပါ။
အကောင်းဆုံး iPhone သူလျှို App
Minspy အင်္ဂါရပ်များ - ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်သင်လုပ်နိုင်သမျှ
အပိုင်း ၆: Spyera
အပိုင်း ၇: မိတ္တူ ၉
အပိုင်း ၈: Highster မိုဘိုင်း
အပိုင်း ၉: Spybubble
အပိုင်း ၁၀: စပဇီး
အပိုင်း ၁၁ ။ မေးလေ့မေးထရှိသောမေးခွန်းများ
Q: iPhone ကိုတစ်ချိန်တည်းမထိဘဲထောက်လှမ်းနိုင်ပါသလား။
Q: ၎င်းကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အတွက် target iPhone ကို jailbreak လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
Q: ဤတည်နေရာနှင့် iPhone တည်နေရာကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေနိုင်ပါသလား။
Q: အကောင်းဆုံး iPhone Spy app ကဘာလဲ။
ဘယ် app ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်၊ ဒီ app ကိုအကောင်းဆုံး iPhone spy app များမှစီစဉ်ပြီးထို မှနေ၍ ရွေ့ပြောင်းလိုက်သည်။ စကြရအောင် -
Minspy iPhone Spy App အတွက်အကောင်းဆုံး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Minspy ဟာအလွန်ကောင်းတဲ့အရာတွေကြောင့်ပါ။
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာသန်းနဲ့ချီတဲ့သုံးစွဲသူတွေရှိတယ်။ ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ iPhone ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လစဉ်လတိုင်းအသုံးပြုနေတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤသူများတွင် ၄ င်းတို့၏ကလေးများကိုစောင့်ကြည့်လိုသောမိဘများသို့မဟုတ် ၄ င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုသံသယရှိသောသူများပါ ၀ င်သည်။
Minspy သည်အလွန်မြင့်မားသောထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းကိုခံစားနိုင်ပြီးဆိုလိုသည်မှာ Minspy ကိုအသုံးပြုသောသူတိုင်းလစဉ်အသစ်သက်တမ်းတိုးလေ့ရှိသည်။
Minspy သည် iPhone ရှိသူလျှို app အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သနည်းဟုသင်တွေးမိသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ကောင်းပြီ၊ မင်းကိုအတူတူအကြောင်းပြချက်အများကြီးပေးမယ်။
iPhone Minspy spy solution ကိုလူတွေကဘာကြောင့်ရွေးချယ်ရတာလဲ။ ဒီအကြောင်းပြချက်တချို့ကိုဒီမှာငါပြောပြမယ်။
သင် iPhone ကို Minspy ဖြင့်စူးစမ်းသောအခါအခြားသုံးစွဲသူများသည်ဘယ်တော့မှရှာမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် iPhone Minspy ၏လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးဖြေရှင်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ ပစ်မှတ်ထားသည့် iPhone ကိုပင်မထိဘဲအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
Minspy ကိုသုံးရန်သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မည်သည့် application ကိုမဆို download လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Minspy ကိုသင်အသုံးပြုသောမည်သည့် web browser တွင်မဆိုဖွင့်ထားသော၎င်း၏ web dashboard မှလည်ပတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုအချိန်မရွေးသင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
ဒေတာလုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ Minspy သည်ဘာမျှမအောင်မြင်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလျှို့ဝှက်ထားရန်ဤအရာသည်ထပ်ဆင့်ခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို၎င်း၏ဆာဗာများပေါ်တွင်ပင်မသိမ်းဆည်းနိုင်ပါ။ Minspy အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ပင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမမြင်နိုင်ပါ။
iPhone spy app အများစုသည်သင်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် target iPhone ကို jailbreak လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်သင်သည် Minspy ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါကကြီးမားသောလိုအပ်ချက်များမရှိပါ။
Minspy သည်သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှတွင်အလွယ်ကူဆုံး iPhone spy solution ဖြစ်သည်။ iPhone စပိုင်အက်ပလီကေးရှင်းအများစုကသူတို့ကိုနာရီပေါင်းများစွာပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ Minspy ဖြင့် ၅ မိနစ်သာကြာပြီးသင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအခြားသူများ၏အချက်အလက်များကိုသင်ရရှိသည်။
Minspy နှင့်သင်ရရှိသောအခြားအေးမြသည့်အရာများစွာရှိသည်။ သူတို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ကြည့်နိုင်ရန်သင်လုပ်နိုင်သည် ဒီအခမဲ့ Minspy သရုပ်ပြကြိုးစားပါ။ ဤသည်က Minspy သည်စွမ်းနိုင်သမျှကိုပြသသည်။
Minspy နဲ့အတူအိုင်ဖုန်းကိုလျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းတာကကမ္ဘာပေါ်မှာအလွယ်ဆုံးအရာပဲ။ ဒီအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှလုပ်ဖြစ်ပါတယ် IOS ကို Minspy ဖြေရှင်းချက်, တစ်ချိန်ကပစ်မှတ်၏ဖုန်းကိုထိရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းကို iPhone ၏ iCloud အင်္ဂါရပ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
iCloud feature ဖြင့် iPhone data အားလုံးကို iCloud server သို့ upload လုပ်သည်။ ၎င်းတွင်သူတို့ iPhone ရှိသမျှအရာအားလုံးပါဝင်သည်။
Minspy သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်အားလုံးကိုထုတ်ယူရန်အတွက်ဤ iCloud backup ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုသင်၏ Minspy dashboard သို့လွှဲပြောင်းလိုက်သည်။ Minspy ဘာမျှမဟန့်တားနိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့်၊ သူတို့၏ iPhone အချက်အလက်များကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်မှာသင်၏ iCloud အထောက်အထားများကို Minspy ဖြင့်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ Minspy သည်ကျန်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
Minspy သည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏အသွင်အပြင်တိုင်းကိုအကျယ်တဝင့်ဖော်ပြပေးသည်။ ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအင်္ဂါရပ်အချို့မှာ -
လူမှုမီဒီယာသူလျှို module တွင်လူကြိုက်များသောလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းတိုင်းအတွက်သင့်ကိုသီးသန့်အသုံးပြုသူမက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန် tabs များရှိသည်။ Minspy ကသင့်ကိုခွင့်ပြုတယ် ဖေ့စ်ဘုတ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုစူးစမ်းပါSnapchat ကိုခြေရာခံခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ Instagram ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူတို့၏ WhatsApp စာများကိုပင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
Call Monitor သည်သင့် iPhone ကိုအသုံးပြုသူများမှပြုလုပ်သောနှင့်ခေါ်ဆိုမှုအားလုံးကိုခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းနှင့်အတူပေးသည်။ သင်လိုချင်လျှင်၎င်းတို့၏ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်သင့်အားစွမ်းဆောင်ချက်တစ်ခုပေးသည်။
keylogger ဆိုတာ iPhone သူလျှိုတစ်ယောက်အတွက်ရနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာပဲ။ ရှာပါ iPhone အတွက်အကောင်းဆုံး keylogger အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ် အသုံးပြုသူကသူတို့ iPhone မှာရိုက်သမျှအရာအားလုံးကိုပြတယ်။ ၎င်းတို့တွင်သူတို့၏မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ ဘရောက်ဇာရှာဖွေမှုများ၊ သုံးစွဲသူအမည်များနှင့်စကားဝှက်များပင်ပါဝင်သည်။
Location tracker သည်အသုံးပြုသူများကို ၂၄ × ၇ နေရာတွင်ပြသည်ကိုပြသသည်။ သင်သည်သူတို့၏မကြာသေးမီကတည်နေရာကို timestamp နှင့်လည်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။ သင်မြေပုံပေါ်တွင်အသုံးပြုသူတည်နေရာအတွက်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားသည့် geofencing feature ကိုလည်းသင်ရရှိသည်။
သုံးစွဲရန်အခြားအရာများစွာရှိသည်။ သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်ပိုမိုကြည့်လိုလျှင်လုပ်နိုင်သည် ဒီအခမဲ့ Minspy သရုပ်ပြကြိုးစားပါ။ ၎င်းသည်သင်အားမှတ်ပုံတင်ခြင်းမတောင်းဘဲသူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုပြသသည်။
Minspy ထက် iPhone ကိုစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းဟာပိုကောင်းတယ်ဆိုရင်၊ သူလျှိုဖြစ်ရမယ်။ သူလျှို သင်သတ်မှတ်ထားသော iPhone ကိုမထိဘဲကမ္ဘာ၏မည်သည့်နေရာမှမဆိုအိုင်ဖုန်းဒေတာများကိုစူးစမ်းခွင့်ပြုသည်။
အလွန်ရေပမ်းစားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းမှလူအများအား Spyier အကြောင်းပြောနေသည်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ တကယ်တော့၊ ကျွန်တော်ဟာ TechRadar လိုမျိုးအကောင်းဆုံးနည်းပညာပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့ဆိုဒ်များမှာ Spyier ၏အကောင်းမြင်သုံးသပ်ချက်များကိုတောင်တွေ့ခဲ့ရပြီ၊ Forbes မဂ္ဂဇင်း, နေပြည်တော်စသည်တို့
Spyier ကမင်းဆီကိုယူဆောင်လာတဲ့အံ့သြစရာကောင်းတာကဒါတွေအားလုံးပဲ။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာ:
Spyier မှာသင်လိုချင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့သင့်ကိုအမြဲကူညီဖို့အဆင်သင့်ရှိနေတဲ့လူတွေပါ ၀ င်ပါတယ်။ Spyier နှင့်မည်သည့်ပြproblemနာပင်ဖြစ်ပါစေ၊ သူတို့၏အသုံးပြုသူအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကို ၂၄ × ၇ သို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အမှန်မှာ၊ သူတို့သည်သင့်အား Spyier မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုပင်လမ်းညွှန်ပေးသည် (သင်မည်သည့်လမ်းညွှန်မှမချန်မထား) ။
အခမဲ့ iPhone spy app များကိုရှာရန်မလွယ်ကူပါ၊ အခမဲ့ဖြစ်သည်ဟုဆိုသော iPhone သူလျှို app သည်လိမ်လည်မှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ iPhone spy app အတွက်မည်မျှပေးဆပ်လိုသည်ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Spyier သည်စျေးအသက်သာဆုံး iPhone spy solution ဖြစ်ပြီးသင်၏ငွေအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးကိုသင်လိုချင်လျှင်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုသင့်သည်။
Spyier ၏ interface သည်ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ စနစ်အတွင်းသင်ရှာတွေ့မည့်အမှားများမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏အဖွားလိုအတွေ့အကြုံရှိသူများပင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
Spyier ကအံ့သြစရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးအသုံးပြုတဲ့အခါငါအလားတူစဉ်းစားမိတယ်။ သင်စမ်းကြည့်ချင်လျှင်သင်လုပ်နိုင်သည် Spyier ကိုဒီမှာစာရင်းသွင်းပါ.
သူလျှို အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ iPhone ထောက်လှမ်းရေးစနစ်ပါ Android အတွက်အကောင်းဆုံးသူလျှို app။ Spyic ဆိုတာအရင်ကတစ်ခါမှသူလျှို app မသုံးဖူးသူတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင့်မှာအရင်အတွေ့အကြုံရှိဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
Spyic ကိုကျွန်တော်သဘောကျတာကသူတို့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘယ်လိုပုံစံရေးသလဲ။ သူတို့ရဲ့ dashboard ကိုသူတို့ရဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကနေအလွယ်တကူရယူနိုင်ပါတယ်။
ပြီးရင် dashboard ကိုရောက်ပြီဆိုရင်၊ features တွေကိုဘယ်ဘက်မှာတွေ့နိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့် Spyic ကိုဆက်လုပ်ပါကသင်မည်သည့်ရုန်းကန်မှုကိုမျှပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည် အကောင်းဆုံး WhatsApp သူလျှို Apps များ
နင် iPhone မှာရှိသမျှကာလပတ်လုံးနီးပါးရှိခဲ့သည့်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးသောသူလျှိုဖြစ်သည်။ နှင့်ဤအချိန်ကြာမြင့်စွာအတွက်ကြောင့်အများကြီးအောင်မြင်ပါပြီ။
၎င်းသည် iPhone မော်ဒယ်အားလုံးကိုထောက်ပံ့သည်။ နောက်ဆုံးသတင်းများသည်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင့်တွင် iPhone ဟောင်းဗားရှင်းရှိမရှိ၊ သို့မဟုတ်မနေ့ကထုတ်ခဲ့သောမော်ဒယ်လ်ကိုသင်စိတ်ပူစရာမလို။
ဒါ့အပြင်၎င်းမှာ app တစ်ခုမှာပါ ၀ င်သမျှကောင်းတဲ့အချက်တွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ကောင်းမွန်သော iPhone spy app တစ်ခုရှာနေပါက Cocospy သည်သင့်ကိုစိတ်ပျက်စေမည်မဟုတ်ပါ။
ဆဲလ်ဖုန်းသူလျှိုအက်ပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးပြုလိုသူအများစုသည်မိဘများဖြစ်ပြီးသူတို့၏ကလေးများအား tabs များထားလိုကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဖြစ်ပွားသောဆိုက်ဘာရာဇ ၀ တ်မှုများသည်ကလေးများကိုအဓိကပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီမှာ Fami360 iPhone သူလျှိုဝန်ဆောင်မှု ကစားသို့လာ။ ၎င်းသည်ကလေးများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုကြီးကြပ်ရန်ဆန္ဒရှိသောမိဘများအသုံးပြုရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Fami360 နှင့်သင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင့်ကလေးလုပ်ဆောင်သမျှကိုသင်သိရှိလာလိမ့်မည်။ သူတို့နဲ့ဘယ်သူတွေစကားပြောနေတယ်၊ သူတို့ပြောနေတာကိုသင်ပြောနိုင်တယ်။
မိဘများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုချိုးဖောက်သောမိဘများကိုမကြိုက်ကြသောကြောင့် Fami360 သည်သင် iPhone ကိုသူလျှိုလုပ်နေသည်ကိုသင့်ကလေးအားမည်သည့်အခါကမှခွင့်မပြုပါ။
အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာ Fami360 သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူပါရှိသည်။
Spyera ဟာသင့်အတွက်အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့ iPhone Spy App ကောင်းတစ်ခုပါ။ အရင်တုန်းကလူကြိုက်များခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့နဲ့ဒီခေတ်မှာအခြားပိုကောင်းတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေကဒီပန်းချီကားကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။
သို့သော် Spyera သည်နောက်ကျကျန်ခဲ့သည်မဟုတ်။ ၎င်းတွင်သင့်အားတစ်စုံတစ် ဦး ၏အိုင်ဖုန်းတွင်အချက်အလက်များစွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ သင်သည်ဤစာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးရှိအခြားအက်ပ်များနှင့်အတူအင်္ဂါရပ်များစွာကိုရနိုင်သော်လည်း၊ သင်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိပါကစပိုင်သည်ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Spyera ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အဓိကအားနည်းချက်မှာထိုအရာဖြစ်သည် သင့်အား jailbreak လုပ်ရန်လိုအပ်သည် iPhone ကို ဦး တည်သည်။ ၎င်းကို iPhone အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အချက်အလက်ကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်စက်ကို jailbreak မပြုလုပ်လိုသောပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။
Spyera ကအဆင်ပြေပါတယ်။ jailbreaking လုပ်တာကိုစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်လက်ထောင်ချင်ပါတယ်။
Copy9 သည်အကောင်းဆုံး iPhone spy app တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သော apps များနှင့်အလွယ်တကူယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။ တကယ်လို့သာကောင်းရင်ဒီစာရင်းထဲမှာထိပ်ဆုံးကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာသင်စဉ်းစားမိနိုင်တယ်။
ကောင်းပြီ၊ ဒါကြောင့် Copy9 မှာအားလပ်ချိန်တွေကြောင့်ပြtheနာတက်နေတယ်၊ ၎င်းသည် Copy9 ကို ၀ ယ်ယူသူများစွာသည်သူတို့၏ပိုက်ဆံဖြုန်းတီးနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုတိုင်ကြားရန်ဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်က Copy9 ကိုအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သောအခါကံကောင်းသည်ဟုသင်ယူဆပါကရှေ့သို့ သွား၍ စမ်းကြည့်နိုင်သည်။
ဤစာရင်းရှိအခြား iPhone spy app များကဲ့သို့ Highster ဖုန်းသည်လူကြိုက်များမှုနည်းပါးသော်လည်းဖြေရှင်းနည်းမှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သည်
၎င်းကို iPhone တည်နေရာခြေရာခံခြင်းအတွက်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်၊ ဤအက်ပလီကေးရှင်း၏အခြားအင်္ဂါရပ်များမှာနည်းနည်းနည်းပါးသည်။ Highster ဖုန်းများကိုအသုံးပြုသောလူအများစုသည်ငါပြောခဲ့သည့်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများကိုအမှန်တကယ်မကြားဖူးသူများဖြစ်သည်။
Highster ဖုန်းများ၏အဓိကအားနည်းချက်မှာ ၄ င်းတို့သည်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခထက်နိမ့်ကျသောတစ်ကြိမ်ငွေပေးချေမှုလိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်မကြာမီကုန်ဆုံးမည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းမှုများကိုပေးသောအက်ပလီကေးရှင်းများသည်ပုံမှန်နှင့်မကြာခဏမွမ်းမံမှုများနှင့်များလေ့ရှိသည်။ တစ်ကြိမ်ပေးချေခြင်းဆိုသည်မှာသင်ခြေရာခံလိုသည့်ဖုန်းကို Highster Mobile မှပင်ပံ့ပိုးမှုမပြုနိုင်ဟုဆိုလိုသည်။
Spybubble ကို Prospybubble လို့လည်းခေါ်တယ်။ ၎င်းသည်ရိုးရိုး (ရိုးရှင်းစွာ) ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည့် iPhone spy app တစ်ခုဖြစ်ပြီးပစ်မှတ်ထားသည့် iPhone အသုံးပြုသူ၏လုပ်ဆောင်မှုများအကြောင်းသင့်အားအသိပေးနိုင်သည်။
Spybubble မှပေးသောသတင်းအချက်အလက်သည်အလွန်နက်ရှိုင်းသည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်မည်သူစကားပြောနေကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် Minspy ကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ပုဂ္ဂလိကစာတိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတောင်ပြသသောအခါ၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤအရာသည်အားနည်းနေပုံရသည်။
Spybubble ရဲ့ interface ကအဲဒါကိုငါမချီးမွမ်းသင့်တဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်ကလေးဆန်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုနေသည်ဟုအာမခံလိုသောသာမန်အသုံးပြုသူအတွက်အနည်းငယ်သာမန်ဖြစ်ပုံရသည်။
တစ်ချိန်ကရေပန်းစားခဲ့သောအက်ပလီကေးရှင်းများအကြောင်းပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ဤစာရင်းတွင် Spyzie အားဂုဏ်အသရေရှိစေမည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော iPhone ထောက်လှမ်းရေးစနစ်ကိုပေးထားသည်။ ဤစာရင်းရှိထိပ်တန်းအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဆင်တူနီးပါးသောအင်္ဂါရပ်များရှိသည် (လူအများစုမဟုတ်) ။
Interface ကပျမ်းမျှအားဖြင့်ခင်ဗျားကဒါကိုအမှန်တကယ်ညည်းညူမှာမဟုတ်ဘူး။ ထို့နောက်မေးခွန်းပေါ်လာသည် - အဘယ်ကြောင့်ဤစာရင်းတွင်အနိမ့်ဆုံးနေရာရရှိသနည်း။
ကောင်းပြီ၊ အဓိကအကြောင်းပြချက်မှာဤစာရင်းရှိအခြား app များ၏ကုန်ကျစရိတ်ငါးဆနီးပါးကုန်ကျသောစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ သင်ငါးဆပိုမြင့်သောစျေးနှုန်းကိုသင်ပေးဆောင်လျှင်ပင်၊ သင်အမှန်တကယ်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျသောအရေအတွက်ကိုရရှိသည်။
သူကပြောပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ ငါဟာ Spyzie ကိုငါ့ဆီကနေပိုကောင်းတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေရဖို့မမျှော်လင့်ခင်မှာစျေးနှုန်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်သင့်တယ်ထင်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်အထိငါဒီနေရာကိုငါပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်
A: သင်လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းကိုမခံလိုပါက၊ အခမဲ့ဖြစ်သည်ဟုဆိုသော iPhone သူလျှို app အတွက်ဘယ်တော့မျှအသုံးမချသင့်ပါ။
ဖြေ။ ။ ဤစာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းရွေးစရာများကသင့်အား iPhone data အားလုံးကိုရယူရန်မလိုဘဲရယူနိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
A: အချို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများကသင့်ကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့ iPhone ကို jailbreak လုပ်ဖို့တောင်းဆိုတယ်။ ဤစာရင်းရှိအက်ပလီကေးရှင်းအများစု (အထူးသဖြင့်ထိပ်တန်းပြိုင်ဘက်များ) သည် jailbreaking မလိုဘဲ iPhone များကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။
ဖြေ။ ။ ဤအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုစီသည်သင်၏ iPhone မှတိုက်ရိုက်တည်နေရာကိုပေးသည်။ Minspy သည်သင့်အား timestamp နှင့်အတူလတ်တလောတည်နေရာကိုပေးနိုင်သည်။
ဖြေ။ ။ အဲဒါကမင်းရဲ့ ဦး စားပေးမှုနဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်မှာမူတည်တယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်ငါသူတို့ကိုအကောင်းဆုံးကနေ 'မကောင်းကောင်း' အဖြစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်။ ငါ့အတွက် Minspy ကပထမနေရာရတယ်။
ယခုတွင်သင်သည်ထိုတွင်ရှိအကောင်းဆုံး iPhone သူလျှို app များကိုသိပြီး, ငါ့အလုပ်ပြီးပြီနှင့်သင်စတင်သည်။ သင်လိုချင်သည့်မည်သည့်အချက်အလက်မဆိုသင်ရယူလိုသည့်မည်သည့် iPhone spy app နှင့်မဆိုစတင်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်မှန်ကန်သောအက်ပလီကေးရှင်းကိုမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုလျှင် ၅ မိနစ်ထက်မပိုပါစေနှင့်။ ကံကောင်းပါစေ!
မင်းရဲ့ iPhone ကသင့်ကိုသူလျှိုလုပ်နေတယ် - ဒါကိုဘယ်လိုရပ်ရမလဲ
နောက်ဆောင်းပါးဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် iPhone ကိုခြေရာခံရန်